Raibhurari muMapikicha, Autostart pa2016 MacBook, macOS 10.12.3, Tim Cook Zviito, uye zvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac | Ndinobva mac
Pedro Rodas | | apuro, Apple Watch, MacBook Pro
Mumwezve Svondo tinodzikira kubasa uye kugovana newe zvinyorwa zvinozivikanwa kwazvo zvevhiki. Isu tine tsika yekugovana uyu muunganidzwa newe chinhu chekutanga mangwanani neSvondo, asi nhasi zvatora nguva yakati rebei kuti zvigadzirire, kunyangwe isu tisina kupotsa nguva yedu.
Vhiki rino kwave nenhau dzakakurumbira kwazvo izvo zvakave zvakaonekwa zvakanyanya pane yedu blog uye izvo ndizvo chaizvo izvo zvatiri kuenda kukuyeuchidza iwe pazasi.
Isu tinotanga kusangana uku nechinyorwa chatakakuudza maitiro ekugadzirisa ako mapikicha neMaraibhurari kubva kuApp photos zvakasiyana, kuitira kuti iwe ugone kuve nemapikicha ako akarongeka uye akachengeteka. Isu takatsanangurawo maitiro hukuru kufamba uye kuteedzera iwo maraibhurari kune imwe Mac kana kune yekunze hard drive munzira yakapusa.
Imwe nhau yakashanyirwa zvakanyanya ndiyo iyo yatakakurukura maitiro ekugadzirisa kutanga kwe2016 MacBook Pro nyowani kuti isazoshanduka yega paunovhura muvharo. In the 2016 MacBook Pro basa rekutendeuka paMac otomatiki rinosanganisirwa, patinosimudza chivharo kana kubatanidza Mac kune simba. Kune vazhinji vashandisi iri basa rakakwana, nekuti mune yakakwira chikamu chezviitiko, patinosimudza chivharo tinoda kutanga kushanda nekukasira. Mukupesana, vamwe vanosarudza kuita chiito ichi mumunhu wekutanga.
Iwe unofungei Tim Cook vakatengesa makumi matatu emasheya ako eApple? Ichi chikamu chidiki, chidiki kwazvo, chezviito zvese zvainazvo mune iye iye iyezvino CEO weApple. Izvo zvine musoro kufunga kuti aya masheya akatengeswa mazuva mashoma apfuura akafanirwa kutsiva neimwe nzira kudzikira kwemubhadharo waCook, nekuda kwezvinangwa zvekutengesa zvisina kuzadzikiswa mukati megore, chimwe chinhu icho vazhinji vedu tisingatomboite asi icho Ehe, iwo makuru mabhosi emarudzi mazhinji kana makambani ehukuru hwaApple, saTim Cook pachake, anogona kuzviita.
Vhiki rino rakasarudzwawo naApple ku tangisa iyo yepamutemo vhezheni yeese macOS 10.12.3 vashandisi Uye kana svondo rapfuura isu tikapererwa neiyo beta vhezheni yevagadziri, vhiki rino rakasarudzwa neApple kuvhura vhezheni itsva. Mune ino kesi inoshandura mukuvandudza kunoitwa mune dzakapfuura beta shanduro, mhinduro yemamwe mabugs uye kururamisa kwemakanganiso. Sezvakamboita shanduro dzekare dzeMacOS Sierra, kambani inowedzera dzimwe shanduko maererano nemashandiro ehurongwa, asi zvakanyanya vanoisa pfungwa pakuvandudza mashandiro uye kugadzirisa madhigi.
Zvisinei, iyi yakanga isiri iyo chete kuvhurwa kwevhiki uye ndeyekuti mudiki kwazvo mumhuri, Apple Watch zvakare yakagamuchira vhezheni itsva yeinoshanda system. Apple yakaitwa kuti iwanikwe kune vashandisi ve Apple Watch kuvandudza yako inoshanda sisitimu, kunyanya inosanganisira iyo nyowani vhezheni 3.1.3 yemawadhi ekambani. Tiri kutarisana neshanduro iyo musimboti inofanirwa kuve neshanduko shoma kana ichienzaniswa neshanduro 3.1.1 kunze kweimwe, mhinduro yedambudziko rakasiya michina yakavharwa. Inofanira kutaurwa kudaro iyo watchOS 3.1.1 vhezheni yakaburitswa mukati memwedzi waZvita yakakonzera dambudziko chairo kune vazhinji vashandisi ndiani akaona zvishandiso zvavo zvakavharwa kana vachivandudza, sezvo kukundikana kwakavimbiswa kuti kambani yakabvisa izvo uye inopfuura mwedzi yapfuura kubva panguva iyoyo.
Apple inovhara chitoro chitsva chaicho kwaari Apple Tarisa muFrance. Mazuva akapfuura kuratidzwa kweApple Watch akatungamirwa nenhamba zhinji yemakuhwa umo mainzi Apple yaida kuisa musoro wayo zvizere munyika yefashoniMuchokwadi, vazhinji vaive vatapi venhau vanobva muchikamu ichi vaipinda kuratidzwa kweApple Watch, modhi yaizowanikwa mu18-karat goridhe, saka pfungwa yeApple yekukoka nyika yemafashoni kuchiitiko ichi, kuti Ivo vachatanga kushambadza chishandiso chavo muchikamu chino chinofambisa mamirioni emadhora, kunyanya muUnited States. Apple inovhara yega Apple chitoro cheGaleries Lafayette muParis.
Haisi nhau dzekuti vakomana vanoshanda mazuva ese muCupertino havasiye kana chidiki diki mukana. Apple inotora font nyowani, ino nguva imwe yakasikwa yakanangana navo uye yavo, pane yavo yepamutemo webhusaiti ye www.apple.com, akadanwa San Francisco.
Isu tinogona kutoona kuti typography yeiyo peji yekambani inogadziriswazve zvachose. Iyo nyowani tsime modhi yakatanga muna 2015 padivi peApple Watch. Asi zviri kubva svondo rino, pazvinoonekwa pane ese epamutemo Apple mawebhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Raibhurari muMapikicha, Autostart pa2016 MacBook, macOS 10.12.3, Tim Cook Zviito, uye zvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac